Isiphepho esomile: kuyini, kwenzeka kanjani futhi kuyingozi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Wake wawuzwa umqondo we isiphepho esomile. Kwenzeka lapho ukuduma kwezulu kwenzeka okuveza imvula encane noma kungabikho nhlobo. Kungabonakala njengokuphikisana maqondana nokuba nesiphepho ngaphandle kwemvula, yize kwenzeka kaningi. Ezingxenyeni ezisentshonalanga ye-United States kuvame ukwenzeka ngemvamisa enkulu, ikakhulukazi phakathi nezinyanga zentwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngesiphepho esomile, izici zaso nobungozi baso.
1 Yini isiphepho esomile
2 Izimbangela eziyinhloko
3 Isiphepho esomile
Yini isiphepho esomile
Uma sikhuluma ngesiphepho esomile, sibhekisa ohlotsheni lwesiphepho sikagesi olungenayo imvula encane. Imvamisa ibonakala isuka esibhakabhakeni ngombani ojwayelekile kanye nokuduma kwezulu kepha lokho akuvezi imvula. ENtshonalanga ye-United States kuvame ukwenzeka kaningi phakathi nezinyanga zasentwasahlobo nasekuqaleni kwehlobo. Kukulezi zindawo lapho inkomba yokushisa ingaba umswakama ophakeme kakhulu futhi ophansi. Kuyaziwa njengesiphepho esomile ngoba kwenzeka lapho izinga lokushisa nokushisa kuhlangana ngaphansi kwesembozo sefu. Le ngxenye yamafu yaziwa njenge-canopy yasemoyeni.
Kumele kubhekwe ukuthi iyanetha ngempela imvula kepha uma kubhekwa amazinga okushisa, imvula, noma imvula noma enye, ayikwazi ukufinyelela emhlabathini selokhu yahwamuka njengoba iwela eduze komhlaba. Sesibonile kwezinye izihloko ukuthi lokhu uhlobo lwemvula lwaziwa ngegama leVirga. Ngakho-ke, lina imvula impela kepha alaziswa ngoba liyahwamuka ngaphambi kokuwela ngaphezulu.
Ake sibone ukuthi yiziphi izimbangela ezinkulu zesiphepho esomile. Isizathu sokuqala semvelaphi yalezi zinhlobo zeziphepho kungenxa yokusha kwehlathi. Imililo emikhulu yehlathi yenza ukwanda kwamazinga okushisa kanye nokwehla komswakama wemvelo. Lapho umbani ushaya umthombo wephethiloli owomile phansi, kuvela umlilo. Le misebe ivame ukuthinta ikakhulukazi izinyanga zasehlobo. Yize ingani okungenani ezingeni lomhlabathi, izivunguvungu zinombani omningi. Iziteleka zombani ezenzeka ezimeni ezomile zaziwa njengombani owomile. Kungenxa yale misebe eyomile lapho ingashayisa khona uphethiloli futhi ibase umlilo kalula.
Izimila nezimbali zivame ukoma ngalesi sikhathi sonyaka futhi zivutha kalula. Noma imvula ingafika emhlabeni, umswakama uphansi kakhulu ukuthi ungaba nomthelela emililweni. Ngokwengeziwe, lezi zivunguvungu zingaveza imimoya enamandla. okubizwa ngeMicrobursts okungathinta imililo okwenza kube nzima ukucisha.
Ake sibone manje ukuthi yini engaba khona isiphepho esomile. AmaMicrobursts ashiwo ngenhla yisimo sezulu esihambisana nalezi zinhlobo zeziphepho. Lapho imvula ihwamuka njengoba amaconsi amanzi esondela ezingeni lomhlabathi, umhlaba uphola kancane. Kwesinye isikhathi inhlabathi ibanda kakhulu ngesikhathi esifushane. Siyazi ukuthi umoya obandayo unzima futhi uvame ukwehla ngokushesha phansi. Lokhu kususwa komoya kuya ezingeni lomhlaba kungadala imimoya enamandla. Ngemvula encane noma engenayo edala isiphepho esomile kanye nomswakama ophansi wenza izimo zeMicrobursts uma zizinhle.
Imimoya ekhiqizwa yilezi zimo zemvelo ingaphakamisa uthuli oluningi nezinye izidumbu, ikakhulukazi ezindaweni ezisomile kakhulu. Konke lokhu kuholela esivunguvungwini esikhulu sothuli esingadala izinkinga ezimbalwa impela. Lezi zivunguvungu zaziwa njenge-haboobs futhi zenzeka kaningi emazweni asentshonalanga. Ngokumelene nalezi ziphepho zothuli kunezinqubo eziningi zokuvikela. Kufanele kukhunjulwe ukuthi yilezi zivunguvungu othuli ohlangana nazo, ungafa ngenxa yokufinywa.
Into ejwayelekile kakhulu ukuthi lezi zinhlobo zeziphepho zingabikezelwa kusengaphambili. Futhi ukuthi izimo zokuqeqesha ziyabonakala impela. Kunezindawo ezisengozini kakhulu futhi izakhamizi zingaxwayiswa ngokuqala kwesiphepho esomile. Izehlakalo zezimo zezulu zibizwa ngama-IMET futhi baqeqeshelwe ukusesha okokubasa okusiza ukusabalalisa imililo yasendle. Lezi zazi zezulu ziqeqeshelwe ukubikezela isimo sezulu esisezingeni elincane. Ngale ndlela, bayakwazi ukusebenza kokusebenza komlilo ngokuya ngezimo zamanje zemvelo.
Basebenza futhi njengabaphathi abangasiza ekuxhumaniseni yonke imizamo yokuqapha ukubikezela isimo sezulu. Izinqumo ezithathwa yilaba besimo sezulu ziyabhekelwa ukwenza ngcono ukulawulwa nokuvinjelwa komlilo wasendle ngokususelwa ezibikezelweni abangazenza ngejubane lomoya nokuqondisa.
Okuvame kakhulu ukuthi izivunguvungu ezijwayelekile zihambisana nemvula. Kodwa-ke, akuvamile ukuthola lolu hlobo lwesiphepho esomile ezweni lethu. Imvamisa yakhiwa lapho okuqukethwe kwamanzi kwefu akukukhulu kakhulu ukukhiqiza izihlambi zamazinga okushisa kuphezulu kakhulu futhi nemvelo yomile. Yile ndlela amaconsi amanzi ayahwamuka ngayo ngaphambi kokufika ebusweni bomhlaba. Zivame ukuba yingozi kakhulu, ngoba umbani owela lapho kunezivunguvungu ezomile ungadala umlilo wehlathi lapho ufika ehlathini noma esihlahleni esomile. Njengoba ingani noma ingani kancane, amathuba okusabalala komlilo maningi.
Njengoba ukwazi ukubona, lezi zinhlobo zeziphepho zidinga ukubikezelwa okuqondile noma okuncane ukuze zikwazi ukugwema imililo eminingi yehlathi eyenzeka ezindaweni lapho lezi zimo zenzeka kaningi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi siyini isiphepho esomile nezimpawu zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isiphepho esomile